‘प्रेमगीत ३’ मा प्रदीपको पिता बन्लान् हमाल ? « THULOPARDA.COM: Entertainment News Portal From Nepal
‘प्रेमगीत ३’ मा प्रदीपको पिता बन्लान् हमाल ?
करीब २ वर्षदेखि कुनै चलचित्रमा काम नगरेका अभिनेता राजेश हमाललाई चर्चित चलचित्र ‘प्रेमगीत’ को तेस्रो सिरिज अफर भएको छ । निर्माता सन्तोष सेनले हमाललाई अभिनेता प्रदीप खड्काको पिताको भूमिका अप्रोच गरेका हुन् । खबरअनुसार, चलचित्र गर्न हमाल सकारात्मक देखिएका छन् ।
गोप्य स्रोतका अनुसार भने चलचित्रमा हमाल फाइनल भइसकेका छन् । तर, हमाल चलचित्रमा अनुबन्ध भएको कुरा भने निर्माता सेनले बताउन चाहेनन् । उनले छलफलकै क्रममा रहेको बताए । उनले भने- ‘फाइनल चाहिँ भइसक्नु भएको छैन । अहिले हामी स्क्रिप्टमा बसिरहेका छौं ।’
‘प्रेमगीत’ को पहिलो पार्टलाई निर्देशक सुदर्शन थापाले निर्देशन गरेका थिए भने दोस्रो पार्टका निर्देशक रामशरण पाठक हुन् । अब तेस्रो पार्टलाई ‘डमरुको डण्डीवियो’ फेम्ड निर्देशक छेतन गुरुङले निर्देशन गर्दैछन् । चलचित्रको दशैंको आसपासबाट छायांकन सुरु हुने बताइएको छ ।